Ny emulator Game Boy GBA4iOS dia tsy misy intsony noho ny tsindry avy amin'i Nintendo | Vaovao IPhone
Ny malaza Game Boy emulator ho an'ny iOS, GBA4iOS, dia nesorin'ny mpamorona azy Riley Testut taorian'ny taona Nintendo fitarainana noho ny fanitsakitsahana ny zon'ny mpamorona, satria afaka namaky tao amin'ny The Next Web izahay. Testud dia nandefa ity fampahalalana ity tao amin'ny kaonty Twitter-ny ary nitatitra fa hanohy hiasa milamina amin'ny fitaovana iOS ny emulator, saingy mijanona vetivety ny fahafaha misintona ROM vaovao hilalaovana.
GBA4iOS dia nahazo ny fanavaozana lehibe indrindra ny volana febroary lasa teo, izay nanampy iPad fanohanana, lohahevitra isan-karazany ho an'ny mpamily, fanohanana ny iOS 7, fampidirana amin'ny Dropbox ary ny mety fisintomana ROM ho an'ny Game Boy avy amin'ny pejy emulator misy an'ireto lalao ireto.
GBA4iOS nahavita nandany ny fameperana Apple Store ary Azo apetraka amin'ny fitaovana iOS rehetra amin'ny alàlan'ny fitsidihana ny pejy ofisialin'ny tetikasa fotsiny ary tsindrio ny rohy hampidinana azy. Tsy nilaina ny manana Jailbreak amin'ny fitaovana hahafahana mankafy ity emulator Game Boy mahafinaritra ity.
fomba nentim-paharazana, Apple dia nanana fitsipika henjana momba ny emulator console ao amin'ny App Store, noho izany ny rindranasa toa ny GBA4iOS dia voatery nitady fomba hafa ahafahan'ny mpampiasa misintona azy. Ohatra, ny emulateur toa ny iMame sy iDOS dia nankafy ny fisian'izy ireo tao amin'ny App Store nandritra ny fotoana fohy noho ny fitarainana IP mety hitranga.
Na eo aza ny fanesorana GBA4iOS, ny Nintendo DS emulator ho an'ny iOS, NDS4iOS, izay niseho tamin'ny volana lasa mbola azo jerena ao amin'ny tranonkalany avy. Na izany aza, tsy fantatra raha efa nanatanteraka ny fomba mifanaraka amin'izany i Nintendo mba hanafoanana azy io ihany koa noho ny fanitsakitsahana ny zon'ny sy ny fisorohana ny piraty.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Game Boy GBA4iOS emulator dia tsy misy intsony noho ny tsindry avy amin'i Nintendo
Daniel Garcia dia hoy izy:
Apple sy Nintendo dia tsy manohana olona manana ati-doha betsaka noho izy ireo manana fampiharana tena tsara, fantatsika rehetra fa ny AppStore dia tsy mahazo na inona na inona amin'ny fampiharana azy ireo
Valiny tamin'i Daniel Garcia
Sintomy ny ePub maimaim-poana amin'ny tranokala tsara indrindra